निक्की वर्स्टापेन जोस ब्रेच तपाईको DNA अनलाइन सँग मिल्काउनेका लागि DNA डाटाबेसको स्वीकृति हो: मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	20 नोभेम्बर 2019 मा	• 12 टिप्पणिहरु
यो घृणाको विषय हो र सबैले स्वाभाविक रूपमा महसुस गर्छन् कि जोस ब्रेच निक्की वर्स्टापेन केसमा दोषी ठहरिनेछन्। हामी त्यससँग शान्तिमा छौं, किनकि सबैजनाले महसुस गर्छन् कि यदि तपाईको पीसीमा बच्चा अश्‍लील सामग्री छ भने, तपाईसँग पहिले नै त्यो प्रवृत्ति थियो। यदि डीएनए पनि निक्की वर्स्टापेनका अन्डरप्यान्टहरूमा फेला पर्‍यो भने, यो केवल पूर्वानुमान मात्र हो। के हामीले त्यसबाट बिर्सन्छौं भन्ने सम्भावना यो छ कि यो पूरै मामला बनेको छ र हामी मनोवैज्ञानिक अपरेसन (PsyOp) सँग व्यवहार गर्दैछौं; एउटा साइकोप जहाँ DNA ले उत्तर दिनुपर्दछ। हामी वकिल जेरल्ड रोथोफलाई एउटा डिक पनि भेट्टाउँछौं, किन कि उसले आफ्नो ग्राहकको घरको विवरण मात्र किन छोड्दैन, त्यसो भए हामीले सम्पन्न गरेका छौं। हामी पिटर आर डि भ्रिजलाई एक नायक फेला पार्दछौं, सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर ऊ कुनै फिल्म स्क्रिप्टको निर्देशक हुन सक्छ।
रूथोफ पहिले नै साइकोप वकील साबित भइसकेका छन, किनकि उसले जोस बि.बाट तुरुन्त रिहाइको माग गर्न सक्थ्यो किनकि उसको डीएनए उसको हराएको केसमा प्राप्त भयो र निक्की वर्स्टापेन केसमा मेल खान्थ्यो। तपाईले आफ्नो काँध समात्नुपर्दछ, तर त्यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने त्यस्तो सायसप कल्पित हुनुको एउटा कारण यो हो।
सिद्धान्तमा, डि एन ए सजिलै प्रयोगशालामा प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ, त्यसैले यदि तपाईंसँग कसैको डीएनए छ भने तपाईं यसलाई कपडाको एक टुक्रामा न्यायको रूपमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सक्नुहुन्छ र कसैलाई थप प्रमाणिकरण प्रमाण नभएमा दोषी ठहराउन सकिन्छ। छ यसबाहेक, तपाईं केवल एक NFI रिपोर्ट उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईं र म जे भए पनि यसलाई जाँच गर्न सक्दैनौं।
वास्तवमा त्यहाँ केस प्रमाणित गर्न सँधै सहयोगी प्रमाण हुनुपर्दछ र यसैले सार्वजनिक अभियोजन सेवाले ब्रन्सम्मरहाइडलाई पूर्णरूपमा नक्साpping्कन गरेर राज्यकोषलाई लुट्यो। कहानीलाई थप शोभायमान दिनको लागि एक एक्सएनयूएमएक्सडी मोडल पनि निक्की अन्तर्वस्तुबाट बनेको छ र, अवश्य पनि, त्यो डीएनए कहाँ छ र यो कसरी आएको हुन सक्छ ठ्याक्कै भन्न सक्षम हुन। जे होस्, यो एक तथ्य रहन्छ कि पछि तपाईं आफैले यसमा डीएनए लागू गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं यसको साथ आउन सक्नुहुन्छ किनभने वकिल र संदिग्धले केवल एक फिल्म स्क्रिप्ट पनि खेल्छन्। कुनै पनि केसमा पीटर आर डि भ्रीजको भूमिकाले स we्केत गर्दछ कि हामी यहाँ त्यस्तो फिल्म स्क्रिप्टमा काम गरिरहेका छौं। अभिनेता जोस ब्रेचको साथ एक फिल्म स्क्रिप्ट उनको आफ्नै (मञ्च गरिएको) हराइरहेको व्यक्तिको र रोलरूममा अभिनय गर्ने मुख्य भूमिकामा। एक फिल्म स्क्रिप्ट जहाँमा अब निश्चित रूपमा राष्ट्रिय डीएनए डाटाबेस निर्माण गर्नका लागि अनुमति दिन तयार हुनुपर्दछ र केवल र केवल DNA को आधारमा विश्वास कानून द्वारा विनियमित गर्न। हराइरहेको अवस्थामा प्राप्त गरिएको डीएनए विरूद्ध गैर-बचावको साथ, 1 कानून पहिले नै कमजोर गरिएको छ। रूथफ टोकरीमा खसेको छ।
म स्थिति लिन्छु कि राज्यले सबैको डीएनए चाहान्छ, किनकि यसले मानिसहरूलाई आनुवंशिक रूपमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना सिर्जना गर्दछ। RIVM पहिले नै सुरू भयो किन हो वर्ष 2000 मा अवैधानिक (र यसैले अवैध रूपमा) बच्चाहरूको डीएनए भण्डारण गर्नुहोस् जुन यो डेटाबेसमा एड़ीको दाँतले प्राप्त गरेको हो। आजको टेक्नोलोजीको साथ, त्यो DNA पाउनु एकदम सजिलो छ, किनकि तपाईं मानव DNA लाई CRISPR-CAS12 विधिहरू मार्फत इन्टरनेट मार्फत समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ (तल भिडियो हेर्नुहोस्)। केवल यसको लागि तपाईंलाई आवश्यक कुरा पर्याप्त ब्यान्डविथ छ। त्यो ब्यान्डविथ अब 5G नेटवर्कहरूको निर्माण मार्फत उपलब्ध छ। सैद्धान्तिक रूपमा, तपाईं नेदरल्याण्ड्सको जुनसुकै ठाउँमा प्रत्येक नागरिकको डीएनए समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईंसँग त्यो डीएनए हुनुपर्दछ र तिनीहरू अब खोजीमा छन्। यो त उपयोगी छ यदि तपाईं सबै कानूनी सीमा हटाउनुभएको छ। त्यसो भए तपाईका नागरिकहरूको डीएनए परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ यसको कुनै उल्लेख बिना नै। यो उपयोगी छ यदि तपाईं एक राज्यको रूपमा आफ्नो नागरिकहरूको मानव शरीर को मालिक हुनुहुन्छ। अंग दान कानूनको साथ, त्यो मानव शरीरको प्रत्येक भाग वास्तवमा एक राज्य सम्पत्ति भएको छ र त्यो दहशुत वास्तवमा पहिले नै हटाइएको छ।
के तपाई त्यो सबै टाढा फेच फेला पार्नुहुन्छ? सायद यो किनभने तपाईं अझै पनि विश्वास गर्नुहुन्छ कि हामी सकारात्मक, मायालु प्रजातन्त्रमा बाँचिरहेका छौं; एक न्यानो, मीठो सानो पोल्डर देश मा र हामी आँखाले नै राज्य र यसको सबै वफादार कर्मचारीहरु मा विश्वास गर्न सक्छौं। र तपाइँसँग त्यो छवि छ किनभने हामीसँग मिडिया छ जुन अनुगमन प्रबन्धन गर्छ र छलफललाई निगरानी गर्ने इन्टरनेट सेनाहरू।
CRISPR-CAS12 विधि लागू गर्न सक्षम हुन, तपाईं मानव शरीरमा एक इन्जाइम परिचय गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ कि यो प्रविधिको सम्भव बनाउँदछ। जो कोहीसँग यो एन्जाइम छैन त्यसैले जेनेटिक अनलाइन परिमार्जन हुन सक्दैन। कानून लागू गर्न सक्षम हुन अझ के बढी उपयोगी हुन सक्छ कि अनिवार्य खोप सम्भव बनाउँदछ, ताकि तपाईं अझै सबैलाई चाहिएको एन्जाइम दिन सक्नुहुन्छ। यो विधान लागू गर्न सक्षम हुनको लागि एउटा अलिबी हुनको लागि, तपाईं यहाँ र त्यहाँ रोगहरूको केही प्रकोप हुन रुचाउनुहुन्छ, ताकि मानिसहरूले यो विधान अँगाले। हामी सधैं नियम गर्न सक्छौं 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान'प्रमुख सामाजिक प्रभावको साथ समस्या पहिचान गर्न; प्रतिक्रिया मिडिया र सोशल मिडिया मार्फत पठाइन्छ। यस प्रबन्धन समाधानको स्वीकृति तिर ठाउँ लिन्छ जुन पहिले नै सेल्फमा थियो। एन्टी-टीकाकरण विचारहरूलाई 'सही विचारहरू' लाई जोड्दै र निकट भविष्यमा आर्थिक क्र्याशको माध्यमबाट त्यो 'ठीक' ब्रान्डलाई मेटाएर, तपाईं त्यो 'दायाँ' ब्राण्डसँग सम्बन्धित सबै कुरासँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले अन्तिम बम्प पनि हटाउनुहुन्छ जसले तपाईंलाई सम्पूर्ण व्यक्ति खोपबाट रोक्दछ।
आउनुहोस् हामी हेरौं के तकनीकी मामिला को हो।
अमेरिकी सैन्य विकास संस्थान DARPA ले एक योजना शुरू गरेको छ जसलाई सैनिकहरु लाई आनुवंशिक रूपले परिमार्जन गरी विषालु ग्याँसको हमला प्रतिरोधात्मक बनाउन आवश्यक छ। तपाईं तुलना गर्न सक्नुहुन्छ केही हदसम्म बीउ र मोन्सान्टो रासायनिक चिन्ताको बालीसँग (2018 मा बायर द्वारा लिइएको)। यी बालीलाई आनुवांशिक रूपमा यस्तो हदसम्म परिमार्जन गरिएको छ कि तिनीहरू झारका किलरसँग प्रतिरोधी छन्, जसको अर्थ हुन्छ कि ठूलो स्प्रे विमानहरू उत्पादन क्षेत्रहरूमा उडान प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी आनुवंशिक रूपले परिमार्जित बालीलाई बजारमा राख्नु अघि वास्तवमै राम्ररी परीक्षण गरिएको थिएन भन्ने तथ्य राजनीतिक लबीसँग सम्बन्धित सबै कुरा हो, तर यो रोगको व्यवसायको लागि हो र यसैले फार्मास्यूटिकल उद्योगका लागि हो (बायर आफैले)। आनुवंशिक रूपले सेनालाई परिमार्जन गर्ने तर्कमा, DARPA ले आतंककारीहरूले जैविक आक्रमणको खतरा पनि प्रयोग गर्दछ। लामो अवधिमा, साधारण नागरिकहरू अनलाइन आनुवंशिक परिमार्जन स्वीकार्न तयार हुनेछन्, उदाहरणका लागि, महामारी ल्याएर जुन खोपको विकास भएको छैन। तर्क यो छ कि तपाईले शरीरलाई एन्टी-केमिकल उत्पादन गर्न दिन सक्नुहुनेछ बिना खोपको ठूलो मात्रा उत्पादन गर्न र भण्डारण नगरी नै।
वाकरको तर्क छ कि जैविक दृष्टिले सिपाहीहरुलाई खतराहरुसंग अनुकूलन गर्नु राम्रो विचार हो किनकि यो अब सम्भावित खतराहरूको लागि लागूपदार्थ वा उपचार भण्डारण गर्न उपयोगी छैन।
"भविष्यमा यसको विरूद्ध जनसंख्या बचाउन तपाईंसँग भ्याक्सिन वा एन्टिभाइरसहरूको पर्याप्त आपूर्ति हुन सक्दैन। ... यो सबै सामयिक अनुसन्धान हो - हामीसँग अहिलेसम्म विकल्प छैन, "उनले भने," तर त्यसकारण तपाईं आफ्नो शरीरलाई एन्टिबडी कारखाना बनाउन चाहानुहुन्छ। "
भर्खर DARPA निर्देशक स्टीभन एच। वाकरको साथ पूरा साक्षात्कार पढ्नुहोस् यो लेख वेबसाइट डिफेन्स.gov को।
त्यसकारण हामी यस्तो अवस्थामा छौं जब सरकारले भाइरसको प्रकोप र महामारीको बिरूद्ध संरक्षणको तर्कमा मानव डीएनएसँग टिंकर गर्न सक्दछ। र त्यसपछि मैले मस्तिष्क-कम्प्यूटर इन्टरफेस मार्फत तपाईंको दिमाग पढ्ने क्षमताको बारेमा पनि कुरा गरेको छैन। यदि राज्यले केवल जोस ब्रेचको टाउकोमा उसको सम्झनाहरू पढ्न सक्छ भने त्यो राम्रो हुनेछैन र? के तपाइँ अब बुझ्नुहुन्छ कि यी सबै व्यापक मिडिया मार्ने घटनाहरूले पुलिस राज्य उपायहरुमा सबै बाधा हटाउन सक्छ? यदि यी प्राविधिक साधनहरू ईयूजेनिक फासिस्ट योजनाहरूको साथ एक अविश्वसनीय सरकारको हातमा छन्, तब हामी वास्तवमै एक समस्या छ। क्लाउडबाट सम्पूर्ण मानव जीनोम समायोजित गर्न टेक्नोलोजी छ। त्यो विज्ञान कल्पना होइन: त्यो विज्ञान हो। तपाईलाई चाहिएको सबै ती नागरिकहरूको डि एन ए चाहिन्छ। तपाईं टिभी कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको वंश पत्ता लगाउन वा उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति जाँच गर्न डीएनए विश्लेषण गरेर तिनीहरूलाई न्यानो गरेर सहानुभूतिपूर्ण ढ way्गले त्यसो गर्नुहुन्छ। तपाईं PsyOps मार्फत गडबडी गरी यसो गर्नुभयो जसले मानिसहरूलाई DNA मार्ने मामिलाहरू सुल्झाउने विश्वास दिलाउँदछ।
अब मेरो नयाँ पुस्तकको अर्डर गर्नुहोस्, जसमा म छल र छलको सबै तहहरूको पूर्ण विवरण दिन्छु जसको साथ आम जनता खेलिन्छ र समाधान पनि वर्णन हुन्छ।
स्रोत लिङ्क सूची: trouw.nl, ਰੱਖਿਆ.gov
ट्याग: वकील, B., ब्रेक, ब्रन्सेमरहाइड, cel, de, dna, हत्यारे, आवश्यकता, Gerald, jos, बाल पोर्नोग्राफी, Nicky, OM, अंडरवियर, पत्रुस, R., Roethof, निशानहरू, सजाय, जरिवाना, Verstappen, बढेको, स्थिर गर्नुहोस्
20 नोभेम्बर 2019 मा 16: 51
लिपिको उनीहरूले स्क्रिप्टलाई कहिले पनि अस्वीकार गर्दैनन् र तसर्थ निर्दयताका साथ कुनै कार्यवाही नगरी एजेन्डा लागू गर्न जारी राख्नेछन्।
DARPA ले "Militarized माइक्रोबहरू" खोज्यो ताकि तिनीहरू आनुवंशिक रूपले परिमार्जित ब्याक्टेरिया फैलाउन सकून्
पेन्टागनको डारपा (डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी) आनुवंशिक रूपले परिमार्जित ब्याक्टेरियाहरूलाई “विस्फोटक सेन्सर” को रूपमा फैलाउन सक्षम हुन चाहन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले सूक्ष्मजीवहरूलाई सैन्यकरण गर्ने उपायहरू राम्ररी हेर्न सक्दछ।
अमेरिकाले पहिले नै स्वयं-निर्मित मध्य पूर्वको द्वन्द्वमा आनुवांशिक रूपमा परिमार्जित सैनिकहरू (सुपर सिपाहीहरू) प्रयोग गर्दछ। केहि चीजहरूको परीक्षण गर्न अत्यन्त उपयुक्त क्षेत्र, किनकि उनले सफलतापूर्वक पहिलो खाडी युद्ध V2k (पूर्ण डुप्लेक्स कम। सम्भव छ 5G का साथ) मा परीक्षण गरीयो।
20 नोभेम्बर 2019 मा 20: 35
हो हो .. र विश्वासमा आउनुपर्ने अधिकार मध्ये एक हो "मौन रहनको अधिकार"
यदि तपाईं चुप लाग्ने निर्णय गर्नुभयो भने, हो, तपाईं सेलमा राम्रो र न्यानो रहनुहुनेछ।
20 नोभेम्बर 2019 मा 22: 10
तपाई निश्चित रूपमा फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गरेर भाइरसहरू पनि सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कीटाणुहरू मिस मासमा फैलिएका छन् भने त्यो पक्कै पनि एक हावा हो।
CRISPR / Cas9 जीनोम संपादन पद्धति मानव भाइरसको बिरूद्ध हतियारको रूपमा
21 नोभेम्बर 2019 मा 00: 57
मैले यस लेखको सामग्रीलाई आधारभूत राखेको छु, तर वास्तवमा तपाईले यो भ्याक्सिन मार्फत टाढाबाट भाइरस प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ (त्यो परिचयको एन्जाइम मार्फत) तपाईं वास्तवमा पुन: लेखन योग्य कम्प्युटर प्रोग्रामको रूपमा मानव शरीरलाई विचार गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं थप्न र परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी वास्तवमै बायाक कम्प्यूटरमा हिडिरहेका छौं ..
यसको लागि तपाइँलाई सिधा डेटा जडान चाहिन्छ र त्यो वायरलेस 5G नेटवर्क मार्फत गरिन्छ।
मेरो पुस्तकमा मँ भन्छु कि हामी यसलाई एक कदम अगाडी जान सक्छौं।
21 नोभेम्बर 2019 मा 15: 32
मार्टिन, तपाईको व्याख्या (पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस्) DNA हेलिक्स (जीनोम अनुक्रमण) दूर फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गरेर। र जेओले पूर्ण डुप्लेक्स संचारको रूपमा वर्णन गरिसकेको छ कि सेन्टिएन्ट ग्रिड (SWS - Hive दिमाग) को साथ वास्तविक समय जडान छ भनेर दर्साउँछ कि वास्तवमा यसबाट कुनै उम्कन हुँदैन।
कसरी जीवन आफै परिवर्तन हुन्छ: पढ्नुहोस् - लेख्नुहोस् (RW) जीनोम
DARPA अवतार परियोजना
एजेन्सीका अनुसार, "अवतार कार्यक्रमले एक सिपाहीलाई अर्ध-स्वायत्त बाई-पेडल मेशीनसँग प्रभावकारी रूपमा साझेदार हुन र यसलाई सिपाहीको सरोगेटको रूपमा कार्य गर्न अनुमति दिनको लागि इन्टरफेस र एल्गोरिदमहरू विकास गर्दछ।"
यी रोबोटहरू स्मार्ट र युद्धको गन्दा काम गर्न पर्याप्त चुस्त हुनुपर्दछ, डर्पा नोट गर्दछन्। त्यसमा "कोठा खाली गर्न, सेन्ट्री नियन्त्रण र लडाई दुर्घटना पुन: प्राप्ति।" र ती सबै तिनीहरूको मानवीय पार्टनरको बोलीमा समावेश छन्।
सेन्टिएंट वर्ल्ड सिमुलेशन: एक डिजिटल वर्ल्डमा तपाईंको मन अपलोड गर्नुहोस् क्वान्टम कम्प्यूटर भित्र
यो पहिलो सुपर कम्प्युटरहरूको विकासको साथ थियो, दिमाग नियन्त्रणको लागि प्रणाली; मस्तिष्क र व्यवहार स्थापित थियो। यो साइबरनेटिक्सको नयाँ विज्ञानको अंश थियो, जुन सार्वजनिक 1948 भयो जब अमेरिकी प्रोफेसर नोर्बर्ट वियनरले उही शीर्षकको साथ आफ्नो पुस्तक प्रकाशित गरे।
21 नोभेम्बर 2019 मा 15: 40
होईन, म CRISPR-CAS12 विधिलाई संदर्भ गर्दैछु जुन मेरो लेखको तल TED प्रस्तुतीकरणमा वर्णन गरिएको छ।
21 नोभेम्बर 2019 मा 16: 05
ठीक छ, मसँग सोच्न पर्याप्त कारण छ कि CRISPR-CAS12 पद्धति जिगस पजलको केवल सानो अंश हो र कन्ट्रोल ग्रिडमा न्यूरोलॉजिकल / संज्ञानात्मक कम्पोनेन्टहरू छन् जुन टाढाबाट हेरफेर गर्न सकिन्छ।
पुरुष कागजात र माथिको हटाइएको हार्वर्ड कागजात को छविहरू हेर्नुहोस्।
"जीनोमलाई परम्परागत रूपमा केवल पढ्ने-मात्र मेमोरी (ROM) को रूपमा व्यवहार गरिएको छ जब त्रुटि र दुर्घटनाहरूको प्रतिलिपि गरेर परिवर्तन हुन्छ।"
21 नोभेम्बर 2019 मा 18: 33
म त्योसँग पनि सहमत छु, तर धेरैले यसलाई एक षडयन्त्र सिद्धान्तको रूपमा खारेज गर्नेछन् र त्यसैले मैले दृश्य वैज्ञानिक क्षेत्रमा पहिले नै स्पष्टसँग के देखिन्छ भनेर देखाउँछु .. त्यसैले CRISPR-CAS12 प्रस्तुतीकरण र मस्तिष्कको सन्दर्भ कम्प्यूटर इन्टरफेस। उत्तरार्द्धको लागि म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि एलोन मस्कको यूट्यूबको प्रस्तुतीकरण यूट्यूबमा वा यहाँ साइटमा न्युरेलिंकको सम्बन्धमा।
21 नोभेम्बर 2019 मा 22: 15
मलाई पक्का विश्वास छ कि तपाइँ यो सही यहाँ छ। मैले क्लोन भएका व्यक्तिको तस्वीरहरू हेरेको छु जसको पहिलो टाउकोमा क्लोन गरिएको भेडाको साथ ट्याटू हुन्छ (तिनीहरूका पाखुरामा)। तिनीहरूको जेट कालो आँखा छन्। आँखाको साथ समस्या भएको देखिन्छ। तिनीहरू पूर्ण रूपले प्राकृतिक देखिन सक्दैनन्।
जहाँसम्म मेरा सवालहरू छन्, यो यस्तै हो जुन तपाईंले यहाँ पोष्ट गर्नु भएको युएनको भिडियोमा हो।
तिनीहरू आफ्नो एजेन्डाको लागि प्रयोग गरिएको रोबोटहरू जस्ता छन्। भाडामा लिनेहरूलाई पनि।
केवल उनीहरूले यसको लागि पैसा प्राप्त गर्दैनन् ((आश्रय र रोटी मात्र),
Eng .. तर कहाँ ...
21 नोभेम्बर 2019 मा 22: 31
एह .. म मतलब ZandinOgen को भिडियो हो ,,,
21 नोभेम्बर 2019 मा 23: 49
मार्टिन, तपाईं सावधानी बुझ्नुहुन्छ ... तर मानिसहरूले '60 वर्षमा डेलगाडोको अनुसन्धान मात्र बुझ्नुपर्दछ कि विज्ञानले यस दशकहरूमा केही उफ्रिदियो भनेर बुझ्न। र तुरुन्त एक सीआईए शब्द 'संघर्ष सिद्धान्त' को रूपमा प्रयोग गर्न
24 नोभेम्बर 2019 मा 16: 20
« ग्रेटा थुनबर्गका हजुरबा हजुरआमा हरितगृह प्रभावको आविष्कारक र युजेनिक्स मार्फत जनसंख्या घटाइएका छन्।
किन ट्रम्प एक विरोधी ग्लोबलवादी होइन तर अर्को कुलीन पदवी हो »
कुल भ्रमण: 14.836.766